China ijeli wamehlo mveliso kunye nabenzi | Huanyi
Ukushushu nokucinezelwa kweCompress, enokuphinda isebenze, akukho ukuvuza, okungayityhefu
Ubukhulu: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm
Ubunzima: 120g, 130g, 160g, 180g
Isetyenziselwe unyango olushushu nolubandayo luyanceda ukukhulula amehlo adumbileyo, amehlo akhukhumeleyo, ukungahambi kakuhle kwesinus, migraines, ibonelela ngesiqabu ngaphandle kweziyobisi. Ingasetyenziselwa ukuvala ukukhanya kwemaski yamehlo kubushushu begumbi.
Ibonakala ngathi yimaski, kwaye inokusetyenziswa njenge-mask yokupholisa iliso, kodwa musa ukunciphisa umda ekucingeni kwakho. Le mveliso iphambili kukucinezela okushushu okanye ukubanda, yiyo loo nto unokuyisebenzisa kulo naliphi na ilungu lomzimba. Ngemitya, inokuthi iqhotyoshelwe engqinibeni, edolweni, emaqatheni nakwamanye amalungu adinga ukunyangwa ngokucinezelwa okushushu. Le mveliso sisixhobo esisebenza ngokwamaqela "sokuthambisa" kwaye awuyi kuphoswa.
UKUQINISEKISA UKUPHOLISA I-GEL MASK MASKI: Ukuvuka ngamehlo adiniweyo kunye nokudumba okugcwele izangqa ezimnyama ayisosiqalo esihle kuwo nawuphi na umhla. Iimaski zamehlo ze-ayisi zinciphisa ukukhukhumala, qinisekisa ukuphumla okusebenzayo!
UKUSETYENZISWA KOKUSETYENZISWA KWAMASO EMASI: ukubopha imaski ngamehlo anekratshi kunceda ukunciphisa iintlungu kunye nokudumba okunokubangelwa yiminye imicimbi yezempilo. I-Gel bead yokupholisa imaski yamehlo nge-RUBBERIZED STRAP.
UKUNYANGWA KWAMAHLO OKUShushu kunye nokubandayo: Ipakethe yokubanda yamehlo ebandayo inokumiswa ngumkhenkce kwindawo yokuthomalalisa okanye ukufudumeza unyango olufudumeleyo. Isigqumathelo seliso leGel Frozen senziwe ngombala othambileyo ohleli kamnandi emehlweni akho.
Nokuba uyisebenzisela unyango olushushu okanye olubandayo, iqondo lobushushu akufuneki lishushu kakhulu okanye libande. Kulumkele ukusebenza kokubangela ukonakala kwemveliso kunye nokonakalisa ubuhlalu bejel.
Okulandelayo: ibhegi epholileyo yewayini
Ingqele yejeli ebandayo
Ukucinezelwa kwamehlo kweGel
Ukucinezelwa kweGel okufudumeleyo ngamehlo
Ukucinezelwa kweGel eshushu